သရဲအကြောင်းးစာမျက်နာ(၄) - ချစ်သူ့ အ်ိမ်ကလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..
တွေသမျှသရဲအကြောင်း(၃)မှ အဆက် ဖြင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ။
ခွဲထားရခြင်းက စာမျက်နာအ၇မ်းရည်သွား၇င် ဖတ်သူအနေနဲ မျက်စီ၇ှပ်မှာကြောက်လိုဖြင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ ကြောက်နိုင်ကြပါ အဲဟုက်ပါဘူး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ချစ်ခင်လေးစားလျက်နေမင်း။မှတ်ချက်။။ ။။ ဒီပိုစ့်အားလူံးသည် ကိုဇူဇူအောင်ဆိုဒ်ကကူးယူခေါ်ပြထားခြင်းဖြင်သည်။
အင်း… အခုတစ်လောက ကျွန်တော်ဘ၀မှာ တော်တော်လေး အမှတ်ရစရာတွေ ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဟုတ်ရယ်။ အခုလမှာပေါ့နော်။ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေရော၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရော၊ ရီမောစရာလေးတွေရော တစ်စုတစ်စည်းတဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့ တဲ့ လ ဆို မမှားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ပြောရလဲဆိုရင်ဖြင့် ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ… ။
အခုတစ်လောဗျာ။ လူက မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ အာခီဒို ပြေး။ ပြီးရင် ပြန်လာ…. ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်။ ညနေဆို အာခီဒို ပြန်ပြေးနဲ့ ဆိုတော့ 
ညပိုင်း ပြန်လာရင် လူက တော်တော်လေး ပင်ပန်းနေပြီ။ တစ်ခါတစ်လေဆို လမ်းတောင်မလျှောက်ချင်ဘူး။ မနက်ပိုင်း သင်တန်းမှာက အဖြူတွေပဲ ရှိတယ်။ အ၀ါဆိုလို့ အနော်ပဲ ရှိတာ။ အဲဒီတော့ဆရာက အစမ်းပြချင်လည်း အနော်ပဲ ကိုင်ပေါက်တယ်။ အဖြူတွေက လက်တည့် စမ်းချင်လည်း အနော်ကိုပဲ စမ်းတာ။ ဓါးမှန်သမျှ လာလာသွေးတဲ့ ဓါးသွေးကျောက်ကို ဖြစ်ရော။ ညနေပိုင်းဆိုလည်း ဘာမှ ထူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ သူကိုင်ပေါက်၊ ကိုယ်ကိုင်ပေါက်နဲ့ ။ ပြန်လာပြီဆို တစ်ကိုယ်လုံးက နာကျင်နေတာပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ နာကျင်နေပါစေဗျာ။ လူက ခံနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသား နာကျင်ရင်တော့ မခံနိုင်ဘူးဗျ။ အဟုတ်ရယ်။ ဘုန်းဘုန်းကို လဲရော ( ဘာမှလည်း ချိုင်ဝူး ဟီး ) ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ ပေါ့ဗျာ။ အနော် အာခီဒိုကနေ ပင်ပန်းပြီး ပြန်လာတဲ့ အချိန် နှလုံးသားနာကျင်မဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျ။ အနော်ပိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးက အနော်ကို မချစ်နိုင်ဝူး ဆိုပြီး ငြင်းလိုက်လို့ ပါ။ အဲဒါကြောင့် ရင်ထဲမှာ သိပ်မကောင်းဝူး ဖြစ်နေတယ်လေ။ နင်နေတယ်။ ဘာနင်လို့နင်မှန်းမတိဝူး။ ဆို့ ဆို့ တတ်လာတာ။ ရေသောက်လည်း ပျောက်ဝူးရယ် အဟုတ် ။
အဲဒီတော့ အိမ်ရောက်ကတည်းက မျက်နှာက မကောင်းဘူးဗျ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် မျက်နှာကြည့် ၇တယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မလား။ အဲဒီတော့ အနော်စိတ်က ညစ်နေတာဆိုတော့ မျက်နှာကလည်း သိပ်မသာယာဖူးပေါ့ဗျာ။ အိမ်ကို ကျွန်တော်ရောက်တော့ အမတွေ၊ အမေတွေက ရုပ်ရှင်ကြည့် နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကို သတိမထားမိဖူး။ ကျွန်တော်က ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ် ထမင်းတွေဘာတွေ ခူးခပ်စားပြီး။ ကွန်ပြူတာရှေ့ သွားထိုင်နေတာ။ ဒါပေ့ မယ် ပြသနာလေးတစ်ခုက တတ်လာတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ အိမ်ဖေါ်အမကြီးတွေပါ။ သူတို့ ကို ကျွန်တော်က အရင်က စနေကြ။ ရီရီမောမောပဲ။ ဒီနေ့ မှ
ကိုယ့် မျက်နှာက ခပ်တည်တည်လေး ဖြစ်နေတော့သူတို့ က အမေကို အာ သွားချောင်တယ်။ အဲဒါ အမတွေ၊ အမေတွေက မနေနိုင်တော့ အနော်ဆီလာပြီး ဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘာညာပေါ့ဗျာ။ အမှန်ဆိုရင် အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော်က တစ်ယောက်တည်းနေချင်တာ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး အသည်းကွဲချင်ကွဲမှာပေါ့။ ဘယ်နှယ့် …
အမေတွေ၊ အမတွေ ဘေးမှာထားပြီး အသည်းကွဲရမယ်ဆိုတော့ …သိပ်တော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ…နော့ ။ ဒီလိုနဲ့ အမတွေလာမေးတော့ကျွန်တော်က ပင်ပန်းလို့ ပါ၊ ဘာညာပေါ့…လျှောက်ဖေါရတယ်။ သူတို့ က သိတော့ သိတယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိတာ။ အဲဒီတော့ခဏခဏ လာလာချောင်းတယ်။ ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာ သုံးနေတာကိုလေ။ ကိုယ်က ကွန်ပြူတာရှေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ဆော်အကြောင်းတွေးပြီး လွှမ်းနေတယ်ဆိုပါတော့ ဗျာ။ အဲဒါကို လာလာချောင်းတော့ … ဘယ့် နှယ့် အသည်းကွဲရတာ ဖီလ်းအောက်တာပေါ့ဗျာ ဟုတ်တယ်မလား။ လူရှေ့ …သူရှေ့ ကြီး ဟာကို ။ လွန်တယ်။ အိမ်က တစ်ခါတစ်လေ။ နောက်ဆုံးကျတော့ 
မထူးပါဘူးဟာ ဆိုပြီး အိပ်ယာထဲ ၀င်သွားလိုက်တယ်။ သီချင်းနားထောင်နေရင်းနဲ့လူက အိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျာ…သိလား။
အနော် အိပ်ယာဝင်တော့ဆယ်နာရီ လောက်ရှီမယ်ဗျ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲမသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ဖုန်းကို တစ်ယောက်ယောက် ခေါ်နေတဲ့ အသံကြားတော့ မှ ကျွန်တော်နိုးတယ်။ နာရီ ကြည့် တော့12 ကျော်နေပြီ။ ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ …သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမေဗျာ။ အသံကလည်း အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အသံနဲ့ …
“သူ့ သား သောင်းကျန်းနေလို့ …အိမ်ကို ခဏလာပါဦး” တဲ့ ဗျာ။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ …
“သူလည်း မသိဘူး” တဲ့ ။
အဲဒီသောင်းကျန်းတယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းက တရုတ်လူမျိုးပါ။ မေမြို့ မှာကတည်းက တွဲလာတာဗျာ။ အနော်ရန်ကုန်ေ၇ာက်ပြီး နှစ်နှစ်လောက်မှာ သူတို့ ပြောင်းလာတာ။ ခင်တာက တော်တော်ခင်တယ်။ ညီအကိုတွေလိုပဲရော။ ဒီကောင်က အေးပါတယ်။ ၇န်တွေဘာတွေ ဖြစ်တာလည်း မရှိဝူး။ အဲဒီလို သောင်းကျန်းတယ်ဆိုတော့ …ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုပြီး အမေကို ခွင့်တောင်းပြီး သူတို့ ဆီ ထွက်သွားလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ။
ဟိုရောက်တော့မသာက သူ့ အခန်းထဲမှာ ထားပေးထားတဲ့ လက်တောပ်တွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေ အကုန်ရိုက်ခွဲထားတယ်။ အဲဒီအပြင် သူခြင်ထောင်တိုင်တွေကိုလည်း ဓါးတွေနဲ့ ခုတ်ထားသေးတယ်။ ရိုက်လည်း ရိုက်ချိုးထားတယ်။ အနော်တောင်လန့် သွားတယ်။ သူအမေဆို နေစရာကို မရှိဝူး။ သားအတွတ် စိုးရိမ်နေတာပါ။ သူတို့ အိမ်က ညီအကို မောင်နှမများတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ ကလည်း လန့် နေကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်က သူ့ အမေကို မေးတယ်။ အန်တီ ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။ သူ အမေ ဘာပြောတယ်ထင်တုန်း။
“မသိဘူး…ဇူးရဲ့ ….သရဲတစ္တေများ ကပ်နေလားမသိပါဘူးကွယ်။ အန်တီတို့ လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ မင့် ကို ခေါ်လိုက်တာ။ မင်းညီ မင်းကြည့် ပေးပါဦး” တဲ့ လေ။
ဘယ်နှယ့် …လူက တော်တော် ပေါက်သွားတယ်။ ညကြီးမိုးချုပ်ဗျာ။ သူများ အိပ်ချိန်ကြီးကို … အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတာ။ ပြီးတော့ သရဲကပ်တယ်ထင်ရင်လည်း ခေါ်ပေါ့ဗျာ။ တရုတ်ဘုန်းကြီး။ ငဇူးနဲ့ ဘာဆိုင်တုန်း ဟုတ်တယ်မလား။ မသိရင်ပဲ အနော်က ဗိန္ဒောဆရာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ။ ဒါပေ့ မယ်လည်း လူကြီးဆိုတော့ … သိပ်မပြောချင်တာနဲ့ဟိုကောင် အခန်းထဲကို ၀င်သွားလိုက်တယ်။
သရဲပူးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဝင်ပူးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနော်ကတော့ ပျော်တာပဲ။ ဒီမှာလည်း အသည်းကွဲနေတာဆိုတော့ ဗျာ။ စိတ်ရှိလက်ရှိ တစ်ခုခုကို ကစ်ချင်နေတာ။ ၀င်တဲ့ သရဲတော့ကံမကောင်းဘူးပဲ ။ အာခီဒိုလည်း စမ်းရပြီဆိုပြီး ပျော်နေတာလေ။ အခန်းထဲလည်း
ရောက်ရော ဟိုကောင်က လက်ထဲမှာ ဓါးနဲ့ ဗျ။ သိလား။ အနော်ကိုလည်း မြင်ရော။ ဓါးကို လွတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့် သွားတယ်။ အဲဒီတော့ မှ အနော်လည်း ရဲရဲတင်းတင်း ကပ်သွားတာ။ ဒီကောင်ကို ဓါးနဲ့ မြင်တော့ သိပ်ကပ်ရဲတာမဟုတ်ဘူး။ မတော်လို့ ထထိုး ဘယ်လိုလုပ်မတုန်းနော့ …မာလကီးယားနေမယ်။ ။ အဲဒါသူ နားေ၇ာက်တော့ …ပုံမှန်လေသံနဲ့ ။ (သူတို့ အိမ်ကလူတွေနာမည်က ခမ်း တို့ ၊ အန်း တို့တရုတ်နာမည်တွေ)
“ ဟေ့ ရောင်…ခမ်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ” လို့ မေးလိုက်တယ်ဗျ။ သူက အစက မပြောဘူးရယ်။ အနော် အတင်းချော့ ချက်မေးတော့ မှ
“အပြင်ထွက်ချင်တယ်” တဲ့ ။
“အမေတို့ ကလည်း… ကိုဇူးကို မခေါ်ပါနဲ့ ဆိုတာကို ဘာလို့ ခေါ်လိုက်မှန်းမသိဘူး” ဆိုပြီး သူ့ အမေတွေကို ဒေါသတွေ ထွက်နေတယ်။
အဲဒါနဲ့ အနော်လည်း ဒီကောင် သရဲပူးတာလား၊ မပူးတာလည်း မသေချာတဲ့ အချိန်ကြီးမှာ အပြင်ကို ခေါ်မထုတ်ရဲ ဘူးလေ။ ပြီးတော့ သူက ဟိုဘက်ကို ခေါင်းလှည့် ပြောနေတာ။ ကျွန်တော် ဘက်ကို မျက်နှာ မမူထားတော့ … ခွဲခြားရခက်နေတယ်။ သူကလည်း အနော်ကို သူ့ ကို အပြင်ထုတ်ပေးဖို့ ချည်း ပြောတာဗျို့ ။ အဲဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ဟာ ဆိုပြီး အပြင်ကို သွားမယ်လို့ ဂတိပေးလိုက်ရတယ်။ သူအမေတွေကိုလည်း ခဏပါလို့ ။ အပြင်ခဏသွားမယ်လို့ …ပြောထားရတာပေါ့ဗျာ။ သူအမေကလည်း သူ့ သားအဆင်ပြေဖို့ ဆို ဘာလုပ်လုပ်ပါတဲ့ ။ ဒီလိုနဲ့ အပြင်ထွက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ ။ ဒီကောင်ကလည်း ခက်တယ်ဗျာ။ အခန်းထဲက ထွက်လာလာခြင်း သူ့ ရဲ့ ကားသော့ ကို အရင်သွားယူတာ။ သူတို့ က ချမ်းသာတယ်။ အဲဒီသော့ ယူတဲ့ အချိန်မှာလည်း မျက်နှာကို သူ့ ရဲ့ အီမိုကေ ဆံပင် အရှည်နဲ့အုပ်ထားတာဆိုတော့ သေသေချာချာ မမြင်ရဘူး။ အနော်က အဲဒါလိုက်ကြည့် နေတာ မဟုတ်လို့ သရဲပူးနေတာဆို အပြင်မှာ အနော်နဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရယ်။ တေပီ ။ အဟုတ်။ နိုင်မယ်မထင်ဝူး။ အဲဒါ သူကို အရှေ့ က ထွက်ခိုင်းပြီး ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ အနောက်က လိုက်လာရတယ်။ အောက်ရောက်တော့ဒီကောင်က ကားထဲ ၀င်တာမဟုတ်ဘူး။ ကမ်းနား ဘက်ကို ထွက်သွားတာ။
အနော်က သူနောက်က လိုက်နေတာလေ။ ဘေးခြင်းလည်း ယှဉ်မလျှောက်ရဲဘူး။ အရှေ့ ကလည်း မသွားရဲ ဘူး။ ဘ၀က ခက်တယ်နော် L ၊ ဆိုးပ။ ဒီလိုနဲ့ကမ်းနားလမ်း ဘက်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ လူတွေက မရှိတော့ ဘူးလေ။ ပြီးတော့ အမှောင်ရိပ်ကများတယ်ရော။
အနော်က သူကို လှမ်းပြောတယ်။ ဘယ်သွားဖို့ လဲဆိုတော့ ။ သူက ခြေဦးတည့် ရာတဲ့ ။ အသံက မာနေတယ်။ အနော် တကယ်ပဲ သူတော့ သရဲ ပူးနေပြီ ထင်လိုက်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သွားနေရင်းဗျာ။ လူတွေ ပြတ်တဲ့ နေရာလည်း ရောက်ရော ဒီကောင်က ကျွန်တော်ဘက်ကို မျက်နှာ မူလိုက်တယ်။ သိတယ်မလား။ ဆံပင်ကလည်း အီမိုတစ်ခြမ်းစောင်းဆိုတော့ … လည်ပင်းကလည်း နည်းနည်းစောင်းချင်နေသေးတယ်။ သွေးပျက်စရာဗျာ။ အနော် ကြက်သီးတွေဘာတွေတောင် ထသွားတယ်။ ခဏလောက်တော့သတိလစ်သွားတယ် ထင်တယ်။ အနော်လေ။ အရမ်းလန့် သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာလို့ အဲဒီလို ပြောလဲဆိုတော့ … သူက အနော်ဘက် မျက်နှာမူပြီးနောက်မှာ အနော်နဲ့ က လက်တစ်လှမ်းလောက်ပဲ ကွာတာလေ။ ပြီးတော့ သူက အနော်ကို ပြေးဖက်ပြီး ငိုပါလေရာဗျာ။ သူငိုတော့ မှ ကျွန်တော် သတိဝင်လာတာ။ ကိုယ်မှာ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိဘူး။ သူက ငိုနေတာတော့အသေငိုတာပဲနော်။ ရှယ်ငိုတာ။ ပိုးစိုးပက်စက်ငိုတာ။ အနော်ထင်တယ်။ ဒီသရဲ ပေါ့နော် တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ ။
ငါ ဘာများကူညီရမလဲမသိဘူး ဆိုပြီး အနော်က မေးလိုက်တယ်။
“ငါ ဘာကူညီရမလဲ” ဆိုတော့ …
“ဒီ အတိုင်းလေး နေပေးပါ” တဲ့ ။ သူ “အားရပါးရ ငိုချင်လို့ ပါ” တဲ့ လေ။
တေယောဗျာ။ အနော်မှာ ရပ်ပေးနေရတယ်။ လမ်းမမှာ တိုက်စီတွေကလည်း သွားနေကြတာ။ သူတို့ က အနော်တို့ ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲတိဝူး။ ယောင်္ကျားအချင်းချင်း ဖက်ထားတယ် ဆိုတော့ လေ။ ပြီးတော့ညဘက်ကြီး ။ အနော်ကတော့ ဖက်ပါဝူး။ ဘယ်နှယ့် …အချင်းချင်းကြီးကို နော့။ ဟိုကောင်ကတော့ အသေဖက်ပြီး ငိုနေတာ။ ဘယ်လောက်တောင် ငိုလဲဆိုရင် သူ နှာခေါင်းက နှပ်ချေးတွေပါ ထွက်ကျကုန်တာ။ အဲဒီထွက်ကျတဲ့ နှပ်ရည်တွေနဲ့ ၊ မျက်ရည်တွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ဘယ်ဖက် ပခုံးကနေ စီးသွားတယ်။ လူကဗျာ ရွံ့ လိုက်တာ မပြောပါနဲ့ တော့ ။ ဒါပေ့ မယ် လန့် နေရတယ်။ တော်တော်ကို လန့် နေတာ။ သရဲက အနော်ကို ဖက်ထားတာလေဗျာ။ ခက်တယ်။ L အဲဒါကြောင့် ကိုယ်က မလှုပ်ရဲဝူးရယ်။
အဲဒီလို ငိုတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတော့ မသိပါဘူး။ အနော်အထင် မိနစ် (၂၀) ကျော်လောက်ရှိမယ်။ ကိုယ်ကလည်း မတ်တပ်။ သူကလည်း မတ်တပ်။ သရဲက ငိုလို့ လည်း ၀ရော။ ဘာပြောတယ်ထင်တုန်း…
“ကျွန်တော် ကောင်မလေးဗျာ။ အနော်ကို ဖြတ်သွားတယ်…အီးဟီးဟီး ရွှတ်” တဲ့ ။
“တိန်” သေရောဗျာ။ ဘယ်နှယ့်… ကြောင်တောင် ကြောင်သွားတယ်။ ကိုယ့် မှာတော့သရဲထင်ပြီး ကြောက်လိုက်ရတာ။ မသာက ဘာသရဲမှလည်း မပူးဝူးရော။ သူဘာသာသူ ဆော်နဲ့ ပြတ်ပြီး ငိုတာကို အနော်ကို ဟင်းဟင်း။ တော်တော်ပေါက်သွားတယ်ဗျာ။ အဲဒီဟာကို စဉ်းစားမိလိုက်တော့သူ့ ကို ဆောင့်တွန်းလိုက်တယ်။
“မင်း သရဲ ပူးနေတာ… မဟုတ်ဘူးလား” ဆိုတော့ … သူက မျက်ရည်တွေ ဘာတွေသုတ်ပြီး
“ဟ…ဘယ် နှယ့်ပူး ရမှာလဲ ကိုဇူးကလည်း” ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။
တကယ်ပါဗျာ။ လူက ငိုရခက်၊ ရီရခက်ရယ်။ လက်တစ်ဖက်လုံးကလည်း နှပ်ချေးတွေနဲ့ ။ အစတုန်းက ရွံ့ ပေမဲ့ လည်း ကြောက်ပြီး မကြည့် ရဲ ဘူး။ အခုမှ ကိုယ့် လက် ကိုယ်ပြန်ကြည့် တော့ …လားလား စိုရွဲနေတာပဲ။ အဟုတ်။ မျက်ရည်တွေကပါ အဆစ်ပါထားတော့ 
ဘာဖစ်နေမှန်းမသိဘူး လက်ကလေ။ အဲဒါနဲ့အန်တော့ တာပဲ၊ ထိုးထိုးပြီး။ အနော်ကလည်း အန်နေရင်းနဲ့ဟိုကောင့်ကို ဆဲနေတာ။
“ငါ့မှာတော့ …(အော )့…နင် သရဲ …( အေ့ ) …ပူးနေ တယ်… (ဝေါ့)…ထင်လို့ ..(အော့ )” ဆိုပြီး စကားက အဆုံးထိ ပြောလို့ ကို
ရတော့ ဝူး ။
ဒီကောင်လည်း အဲဒီတော့ မှ ဇာတ်လမ်းအစ အဆုံးကို နားလည်သွားပြီး ရယ်တော့ တာ။ ခွက်ထိုး ခွက်လန်ပဲ။ အနော်ကလည်း သူကို ကြည့် ပြီး (ကိုယ့် ကို ကိုယ်လည်း ရှက်တာပါတာပေါ့ဗျာ. ဟီး ) အန်လိုက်၊ ဆဲလိုက်၊ ရီလိုက်နဲ့ ။ ပွဲပါဗျာ။ တကယ်ပွဲ။
ဒီလိုနဲ့လသာကမ်းနားလမ်းလည်း အနော်တို့ ရယ်မောသံနဲ့ တင် လျှံထွက်သွားတာ။ ပြီးတော့သူကို ပြန်ခေါ်လာတယ်။ သူတို့ အိမ်ကို သူက မပြန်ချင်သေးဘူးတဲ့ ။ အဲဒါ သူ့ ကို အိမ်အောက်မှာ ထားခဲ့ ပြီး အိမ်ပေါ်တတ်ရတယ်။ သူ့ အမေတွေကို အခြေအနေကောင်းတယ်။ သရဲ ပူးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူဘာသာ သူ စိတ်ညစ်လို့ လျှောက်လုပ်တာ၊ ဘာညာပေါ့ဗျာ။ ဖျောင်းဖျရတာပေါ့။ ပြီးတော့ကိုယ်လက် တစ်ဖက်ကို ကိုယ် ဘာသာကိုယ်ဆေးရတယ် ဟင့်။ အကျီကလည်း ဒီကောင်က ငိုလိုက်၊ နှပ်သုတ်လိုက် လုပ်တာနဲ့ တင် တော်တော်ကို စုတ်ပြတ်သွားတယ်။ အဲဒါ သူ့ အကျီတစ်ထည် ကောက်စွတ်လာရတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကောင် ကားနဲ့ဗိုလ်တစ်ထောင် ကမ်းနားဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ တယ်ဗျာ။ သူက စိတ်ပြေလက်ပျောက်နေရာလေးတစ်ခုမှာ နေချင်တယ်ဆိုလို့ ပါ။ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကမ်းနားက ည (၁၁) ဆို ပိတ်တာ။ ဒါပေ့ မယ် အဲဒီက အစောင့်ရဲတွေက အကုန်လုံး အနော်နဲ့ ခင်တယ်။ ကိုယ် ဆိုးသွမ်းတုန်း အချိန်တွေတုန်းကဆို အမေနဲ့ ရန်ဖြစ်တိုင်း သူတို့ နဲ့ သွားနေတာလေ။ ရဲတွေနဲ့ ။ မဟုတ်ရင် ညဘက် ကိုယ် လျှောက်သွားနေတုန်း မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့ သူတို့ ကဖမ်းမှာ။ အဲဒါသူတို့ နဲ့ သွားထိုင်ပြီး စကားရော ဖေါလျှော၊ လုပ်နေလိုက်တယ်။ ပြီးရော ။ အဲဒီလိုနေလာတော့ 
အနော်ဆို အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ သူတို့ ကလေ။ သွားရင်းနဲ့ အိမ်က မိဘတွေကိုလည်း ဖုန်းဆက်ရတေးတယ်။ စိတ်မပူနဲ့ ၊ ဟိုကောင် ကောင်းသွားပြီ။ ဘာညာပေါ့ဗျာ။ သိနေတာကို မိဘတွေက။ ဒီကောင်ကလည်း အိမ်ခဏခဏ လာနေတာဆိုတော့ ။
ကမ်းနားရောက်တော့ … ကားပေါ်က ဆင်းပြီး လေညှင်းခံကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူက ကျွန်တော်ကို ပြောတယ်။ သူ့ ကောင်မလေးနဲ့ သူနဲ့ ပြတ်သွားလို့ ပါတဲ့ ။ သူ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်လို့ ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် အခန်းထဲ ၀င်ပြီး နေနေတာတဲ့ ။ ဖြစ်ချင်တော့ …သူတို့ အိမ်ကလည်း သူ့ သားကို သိပ်ချစ်ကြတာ။ ဒီကောင် မျက်နှာမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ၊ ဘာညာ ၀ိုင်းမေးကြတာပေါ့ဗျာ။ အမှန်ဆို
အသည်းကွဲနေတဲ့ အချိန်တိုင်းက တစ်ယောက်တည်း တွေးချင်တာတွေး၊ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေရမှ အဆင်ပြေတာလေ နော့ ။ အဲဒါကို
ဘေးက လူတွေက စေတနာနဲ့ တော့ မေးတာပဲ။ ဒါပေ့ မယ် ဒီကောင်က သူ့ ကို ရှုပ်ရကောင်းမလား ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲတာ။
“ငို ချင်နေတာက အစကတည်းကပါ ကိုဇူးရယ်။ တကယ် ကိုယ်ဒီလို ၀မ်းနည်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အမေတွေ၊ ညီတွေရဲ့ မေတ္တာ ကိုတွေ့ လိုက်ရတော့ … ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိတော့ ပါဘူးဗျာ၊ ပြီးတော့ အချစ်ရဆုံးလို့ထင်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်က ဒီလိုလုပ်တော့ကျွန်တော် မခံစားနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်” တဲ့ လေ။
အမှန်ဆိုရင်လည်း ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဒီလို အချိန်ကြီးမှာ ကိုယ့် အမေတွေ့ ရှေ့ ၊ ကိုယ် အမတွေ ရှေ့ တွေမှာ….
“တားကို တူ…အတည်းခွဲတွားတယ်…ဗြဲ” ဆိုပြီး သွားငိုလို့ ကောင်းတဲ့ အရွယ်လည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ခက်ပါတယ်ဗျာ…လောကက ။
သူက သူ့ အသည်းကွဲတဲ့ အကြောင်းပြောရင်း…ပြန်ငိုချင်လာတယ်ထင်တယ်။ သူလည်း ချစ်မှာပါ….သူ့ ကောင်မလေးကို။ အနော်လည်း ခံစားပေးလို့ ရပါတယ်။ ခုလေးတင် ကိုယ်လည်း အသည်းကွဲထားတာဆိုတော့ဟိဟိ ။ ကိုယ်လည်း ရင်ထဲမှာ နင်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေ့ မယ်ဗျာ။ ကိုယ်ထက် ဆိုးတဲ့ သူကို တွေ့ လိုက်ရတော့ …ခဏပျောက်သွားတယ်ထင်တယ်။ အခု သွေးအေးသွားတော့ ရင်ထဲမှာ ပြန်ပေါ်လာပါယောလား ဟားဟ။ ပွဲဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဟိုကောင်က ပုလဲတွေ ခနေပြီ။ တကယ်တော့ ဗျာ…ယောင်္ကျား တစ်ယောက် ငိုတယ်ဆိုတာ ကြည့် ရခက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်က သူကို ဒီလို ပြောလိုက်တယ်။
“မသာကောင်…ငိုမနေနဲ့ နင်….နင်တင် ကွဲထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလည်း ဒီနေ့ ည ပဲ အသည်းကွဲလာတာ” လို့ လေ ဟိဟိ ။
ဒီတစ်ခါ ငိုတာ ရပ်သွားပြီး ကြောင်တောင်တောင် ပြန်ကြည့် နေတာတော့သူပါ။ တကယ်လား၊ ဟုတ်ရဲ့ လားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ။ ပြီးတော့ 
“အာ… တကယ်လားဟင်။ ကိုယ်ဇူး …ပွဲနော်၊ ပွဲ။ တကယ် ကြည့် စမ်း တိုက်ဆိုင်တာလား တိဝူး ဟီးဟီး” တဲ့ ။ သူများအသည်းကွဲ တယ်ဆိုတော့ မသာ အသံက ပျော်နေတဲ့ အသံနဲ့ ။ အဲဒါနဲ့သူကလည်း ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ၊ ဘာညာနဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်လည်း ပြောပြလိုက်တယ်။ ဒီလို ဒီလိုပဲ ဆိုပြီး။ အဲဒီမှာ သူက အံ့ သြသွားတယ်ဗျ…သိလား။ ကျွန်တော့် ကိုလေ။ သူ့ လို မျိုး ကြီး သောင်းကျန်းတာတွေ ဘာတွေ မရှိဘူး ဆိုပြီး။ အမှန်တကယ်တော့သူက အခုမှ အသက်က (၁၉) နစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတာလေ။ စိတ်ဓါတ်က အရိုးခံရယ်။ ဖြူစင်တယ်။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် အနော် ငဇူးတို့နှလုံးသားတွေက ဖြူစင်တော့ တာမှ မဟုတ်တာ။ မာယာတွေကြား လျှောက်သွားနေတာ။ အတွေ့ အကြုံတွေလည်း ရနေပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေဆီကရော၊ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေဆီကရောပေါ့။ အဲဒီတော့ ဘယ် တုန်လှုပ်လိမ့် မတုန်း နော့ဟိဟိ နောက်တာ ။
“ကိုဇူး ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလား” တဲ့ ။
“ဟ…မဖြစ်ပဲ နေမလားဟ၊ ဒီမှာ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုချည်းမှန်းမတိလို့ ..ငါက ၀င်အိပ်နေတာ။ မဖူးတို့ ကလည်း ငါမျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုပြီး အသေလိုက်မေးနေတာ။ ငါက အာခီဒို ကြောင့် ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး လှိမ့် ထားရတာပေါ့ ။ နင့် ဖုန်းဝင်လာတော့ …လွမ်းတာနဲ့ ခံစားနေတာတောင် ဘယ်ရောက်တွားမှန်းမသိဘူး။ သောက်ကျိုးနည်း..သရဲ” ဆိုပြီး အနော်က ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ သရဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ရယ်ပြီး ပြောနေတာလေ။ တကယ်လည်း ရီချင်နေတယ်။ အူတတ်တယ်။ အဟုတ်။
သူကလည်း အဲဒီအသံကြားတော့ဝမ်းနည်းတာတွေ၊ ဘာတွေ ပျောက်ပြီး ရီပါလေရောလား ။
ဒီလိုနဲ့ ကမ်းနားမှာ နောက် အသည်းကွဲရင် ဒီလို မလုပ်ဖို့ ဘာညာနဲ့ ဆုံးမပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ ဗျာ။ ဆုံးမလို့ အာခြောက်ပြီး သောက်တာတင် “ဘီယာချမ်း” လေးဗူး လား တိဝူး ဟိဟိ ။ ဒီကောင်လည်း သောက်နိုင်တယ်။ အပြန်မှာတော့ ရီရီမောမောပါပဲ။
သူလည်း အေးဆေးဖြစ်သွားတယ်။ အနော်လည်း အေးဆေးဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ … ည (၂) နာရီတောင် ထိုးတော့ မှာ။
ကိုယ်က မနက် အာခီဒိုကလည်း ရှိသေးတယ်။ မားသားကိုလည်း ပြီးသွားပါပြီ။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ပြောလိုက်ရတယ်။
“ရင်ထဲမှာလည်း ပြန်ပြန် ဆို့ လာတယ်ဗျာ”
“ငခမ်း…တစ်ယောက်လည်း ဒီလိုပဲ ထင်ပ”
“ဟဲ့ …သောက်ကျိုးနည်း သရဲ” ဟိဟိ ။ ။
မြင်ကွင်းကတော့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်က ထိတ်လန့် သဲဖိုဇတ်ကား ပိုလ်တာဂျေ့ စ် ထဲကအတိုင်းပါပဲ…အမျိူးသမီးလေးတစ်ဦးထံမှာ ပူးဝင်နေတဲ့ သရဲကိုးကောင်ကို သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ မလေးရှားနတ်ဆရာနှစ်ဦး က ဖမ်းဆီးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
အဆိုပါမိန်းကလေးဟာ မကြာခဏ သူမနေအိမ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားလေ့ ရှိပြီး ဘိလပ်မြေဖျော်စက်၊ သင်္ချိူင်းကုန်း စသည့် နေရာတွေမှာ ပြန်တွေ့ ရလေ့ ရှိလို့ တစ်ရွာလုံးကတော့ သူမအကြောင်းပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်….
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ စီတီဘယ်လ်ကစ်မိုဟာမက်နိုး ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ ၎င်းတို့ သမီးလေးထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးနေတတ်တဲ့ လျှိူ
့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုနောက်ကွယ်က တရားခံ နတ်မိစ္ဆာ သရဲတွေကို နတ်ဆရာတွေက အနိုင်ရခဲ့ လို့ ၎င်းတို့ မိသားစုဘ၀လေး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တော့မည်ဟုဆိုကာ ယုံကြည်ဝမ်းသာနေကြပါတယ်….
ထိုတရားခံ နတ်မှင်စာတွေကို နတ်ဆရာများက ဖမ်းပြီး အထူးစီရင်ထားတဲ့ ပုလင်းထဲထည့် သွင်းထားသည့် သတင်းကြားရသည့် ရာပေါင်းများစွာသော ရွာသားတွေဟာ ထိုအိမ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြပါတယ်…
စိတ်ဝင်တစ်စားရှိနေခဲ့ ကြတဲ့ ရွာသားတွေဟာ သူ့ ထက်ငါအလုအယက်တိုးဝှေ့ ပြီး ထိုသရဲဖမ်းထားသည့် 
ပုလင်းများကို ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ ရိုက်ယူခဲ့ ကြပါတယ်…
အမည်ဖေါ်ပြရန်ငြင်းဆိုခဲ့ သည့် အောက်လမ်းနတ်ဆရာ ၂ ဦးဟာ စီတီဘာလ်ဂစ် လေးရဲ့ ဖြစ်အင်ကို သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်မိသိရှိခဲ့ ကြပြီးနောက် လွန်ခဲ့ သည့် သောကြာနေ့ ကစေတနာမေတ္တာဖြင့်အခမဲ့ လာရောက် ကုသပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
ထိုနေ့ ည ၇ နာရီ ၃၀ မှာ နတ်ဆရာတစ်ဦးက မိသားစုနေအိမ်အတွင်း ရွတ်ဖတ်နေစဉ် နောက်တစ်ဦးကတော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးအပြင်ဖက်ကနေ ကျမ်းစာတွေကို ရွတ်ဖတ်နေခဲ့ ပါတယ်…
၁၅ မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ အပြင်မှာရှိနေတဲ့ နတ်ဆရာဟာ အိမ်ထဲကနေ ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တစ်ခု ထိုးဖောက်ထွက်ပြေးသွားတာကို ရိပ်ကနဲတွေ့ လိုက်ရပါတယ်…
သူက နောက်ကနေလိုက်ဖမ်းခဲ့ တာ ဖမ်းမိသွားခဲ့ ပါတယ်…အဲဒီနောက်တော့ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြတဲ့ တစ္ဆေမှင်စာ ရှစ်ကောင်ကို တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြပါတယ်…
တစ္ဆေမှင်စာတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဒုက္ခမပေးနိုင်အောင် အလုံပိတ်ထားတဲ့ ပုလင်းတွေကို ပင်လယ်ထဲကိုလွှင့် ပစ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ နတ်ဆရာက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…။ ။
ပူးဝင်နေသည့် မကောင်းဆိုးဝါးကို နှင်ထုတ်ပေးနေသည့် မလေးရှားနတ်ဆရာ…
( မိခင်ဖြစ်သူကို ဘေးအနားမှာ ပေးလို့ ဒီလိုဆ၇ာများကတော့အမှန်အကန်ပါ…အကြံအဖန်ဆိုယင်သူတို့ 
သူမရဲ့ သမီးဖြစ်အင်ကို သတင်းစာမှာမကြာသေးမီက ဖော်ပြခဲ့ ပြီးနောက် နတ်ဆရာစုစုပေါင်း ၁၇ ဦးက ကူညီကာ သူရဲများကိုနှင်ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့ စီတီဘာလ်ဂစ် လေးရဲ့ မိခင်ဖြစ် သူအသက် ၄၇ နှစ်ရှိ နိုရီဇန် ကပြောပြခဲ့ပါတယ်….လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်လလောက်ကစပြီး သမီးဖြစ်သူ စီတီဘာလ်ဂစ် တစ်ယောက်ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတတ်ခဲ့ ပြီးနောက် လာရောက်ကုသပေးခဲ့သည့် နတ်ဆရာပေါင်း ၁၀၀ ခန့် အတွက် သူမတို့ မိသားစုဟာ ရင်း
ဂစ်ငွေသောင်းနဲ့ ချီပြီး ရှာဖွေကာ အကုန်အကျခံခဲ့ ရတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်….
သို့ သော်လည်း သမီးလေးရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို ( ဘယ်သူမှမကယ်တင်နိုင်တဲ့ ) သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ နတ်ဆရာတွေဟာ အခမဲ့ ကယ်တင်ကုသပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ ကြပါတော့ တယ်….
နောက်ဆုံး အောင်မြင်မှုကြောင့် အခုတော့ မိသားစုအားလုံးဟာ စိတ်ချမ်းသာရပါပြီ…” လို့ လည်း သူမက ဆိုခဲ့ ပါတယ်…
အခုတော့ သူမကိုဒုက္ခပေးတဲ့ တရားခံတစ္ဆေမှင်စာများကို ဖမ်းမိခဲ့ ပြီမို့ သူမဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ရက်ကစပြီးပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိတော့ ပဲ ပုံမှန်ဘ၀ကိုသာ ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါတော့တယ်လို့ စီတီဘာလ်ဂစ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
” ကျွန်မတို့ မိသားစုအားလုံးကို ကူညီခဲ့ ကြတာတွေအားလုံးအတွက် ဘယ်လာက်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဆိုတာ စကားလုံးနဲ့ တောင်ပြောပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး….
အခုဆိုယင် ရုတ်တရက် ကိုယ့် ကိုယ်ကို မေ၇ာက်ဘူးတဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် ဖွယ်နေရာတွေကိုရောက်နေတာရုတ်တရက်တွေ့ ရဖို့ မစိုးရိမ်ရတော့ တဲ့ အတွက် စိတ်သက်သာရာရခဲ့ ပါပြီ…” လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်…
သရဲကိုးကောင်ကို ဖမ်းထည့် ထားသည်ဟုဆိုသော ပုလင်းများကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြစဉ်…
မလေးရှားမှာတော့ အကဲမစမ်းနဲ့ နော်…သရဲဖမ်းမယ့် ဆရာတွေရှိတယ်…
သူတို့ နည်းသူတို့ ဟန်နဲ့ တော့ စွမ်းကြတာပါပဲ…။ ။
မှတ်ချက်။ ။ https://www.mandalaygazette.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ ။
တလောက နယ်မြို့ လေးတစ်ခုက အကိုတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ ဆီ အလည်လာတယ်ဗျ။
အဲဒါသူနဲ့ စကားစမြည်းပြောဆိုရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဆိုဒ်ကို ပေးဖတ်လိုက်တော့သူကပြောတယ်။
သရဲအကြောင်းတွေ ဖတ်မိပီးတော့ လေ။ မင်း “သံလမ်းပေါ်က ဗိုက်ကြီးသည်သရဲ” မှတ်မိသေးလားတဲ့ ။ အဲဒါလေးရေးလိုက်ပါလားလို့ 
ဆိုလာတယ်။ အဲဒီတော့ မှ ကျွန်တော်လည်း သံလမ်းပေါ်က သရဲ အကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားဖြစ်တာခင်ဗျ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုရယ်ပါ။
လိုက်မရှာဝူး။ ဟီး ဂွင်ကောင်းတယ်နော်။ အနော်ပုန်းတဲ့ နေရာလေ။ အဲဒါနဲ့ အနော်လည်း သူတို့ ကို ပန်းပေးပြီလား မေးဖို့ ဆိုပြီး နေရာပြောင်းရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာကနေ လှမ်းမေးရင် နေရာသိသွားမှာပေါ့နော့ ။ အဲဒါကြောင့် နေရာပြောင်းတာ။ အဲဒါ မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ အနော်တို့ လမ်းထဲကို ထဖို့ အသွားဗျာ။ အုတ်တံတိုင်းပေါ်က အသံကြားလို့ လှည့် ကြည့် မိတာ။ လားလား ဘယ်နှယ်ဗျာ။ အုတ်တံတိုင်း ကုန်ကျော်တံတားလောက်ကနေ လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာတယ်။ သူလျှောက်လာတဲ့ ပုံစံကလည်း အုတ်တံတိုင်းပေါ်မှာဗျာ။ လူက ၀တုတ်တုတ်ကြီးရယ်။ လှုပ်တုတ်၊ လှုပ်တုတ်နဲ့ ။ အဲဒါကို အနော်က
(ဒီတခါ တင်ပြတဲ့ သရဲ ဇတ်လမ်းက ကိုယ့်တွေ့တော့ မဟုတ်ပါ။ ၁၉၈၁- ၁၉၈၂ ခုနှစ်
ပတ်ဝန်းကျင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ “ကျောပေါက်ကြီး သရဲ”
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံးသို့ ကျောင်းသူ လူနာ တစ်ဦး
အရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကျောင်းသူမှာ မာလာဆောင်က ဟု
ကျောင်းသားလောက ကဆိုကြပါတယ်။ ထိုကျောင်းသူသည် ထိုခေတ်က ဒေသကောလိပ်မှ
တဆင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပင်မတွင် အထူးပြု သိပ္ပံဘာသာရပ် တစ်ခုအား တက်ရောက်
ပညာသင်ကြား နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကျောင်းသူသည် လက်တွေ့ခန်း (Practical room) တွင် လက်တွေ့ ပညာရပ်များ
သင်ကြားပြီး မိမိ နေထိုင်ရာ အဆောင်သို့အခြား ကျောင်းသူ
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပြန်လာ ခဲ့ပါတယ်။ အဆောင်သို့ မရောက်မီ သူ့မ၏
လွယ်အိတ် အတွင်း၌ ပစ္စည်း တစုံတခု ကို ရှာဖွေ ပါတယ်။ ထိုနောက်
သူငယ်ချင်းများကို “နင်တို့ အဆောင်ကို အရင်ပြန်နှင့်အုံး၊ ငါ့
မှတ်စုစာအုပ် လက်တွေ့ခန်းမှာ ကျန်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒါ ပြန်သွား ယူလိုက်အုံးမယ်၊
ကိစ္စ မရှိဘူး၊ ငါ တစ်ယောက်တည်း သွားလိုက်မယ်” လို့ ပြောပြီး
လက်တွေ့ခန်းဘက်သို့ ထွက်ခွာ သွားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများလည်း ထိုကျောင်းသူနှင့် လမ်းခွဲပြီး
အဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် ထိုကျောင်းသူသည်
ခြေထောက်တွင် ဖိနပ်မပါဘဲ မောကြီး ပန်းကြီးဖြင့် အဆောင်အတွင်း သို့
ပြေးဝင် လာပါတယ်။ သူမအား ဘာဖြစ်လာလဲ၊ ဘယ်သူက
ဘာလုပ်လိုက်လဲလို့ ၀ိုင်းမေးကြသော်လည်း ဘာမှ ပြန်မဖြေဘဲ ၀မ်းနည်းစွာ
ငိုကြွေးနေပါတယ်။ ထူးခြားပုံမှာ သူမငိုနေချိန်၌ ငိုသံ လုံးဝ မထွက်ပါ။
အဆောင်မှူး အပါအ၀င် အဆောင်ရှိ သူငယ်ချင်းများ မေးသော မေးခွန်းများကို
ပြန်မဖြေနိုင်တော့ပါ။ တကိုယ်လုံး ခြစ်ခြစ်တောက် ကိုယ်ပူလာတာကို
တွေ့ရသောကြောင့် သူမကို တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံးသို့ တင်ပို့လိုက် ရပါတယ်။
ဆေးရုံးရောက်ပြီး ထိုကျောင်းသူသည် ထူးဆန်းစွာ စကားသံလုံးဝ မထွက်ဘဲ အ တဲ့
ပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆေးရုံးရှိ ဆရာဝန်များက အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်
စစ်ဆေးသော်လည်း ကိုယ့်ခန္ဓာတွင် ထိခိုက်မှု လုံးဝ မတွေ့ရှိရပေ။
ထိုကျောင်းသူသည် တစုံတခုကို လုံးဝ စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေသော ပုံစံဖြင့်
စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံဖြင့် ဆေးရုံးတွင် နှစ်ပတ်နီးပါး
ကြာမြင့်လာသော အခါ နယ်မှ မိဘများ လိုက်လာပြီး နယ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်
သွားပါတယ်။ နောက်တစ်လလောက် ကြာသောအခါ ထိုကျောင်းသူသည်
ပုံမှန်အနေအထားဖြင့် ကျောင်းသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကြမှ
သူမ လက်တွေ့ခန်းသို့ မှတ်စု စာအုပ် ပြန်ယူခဲ့သော ထိန့်လန့်ဖွယ်
ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ကျောင်းသား လောကက ကြားသိ ရပါတယ်။
သူမသည် မှတ်စု စာအုပ်ယူရန် လက်တွေ့ခန်းကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခန်းအတွင်းသို့ ၀င်လိုက်သော အခါ သူမထက် အသက် အရွယ်အရ ဆယ်နှစ်နီးပါး
ကြီးရင့်သော လူကြီးတစ်ယောက် အခန်းအတွင် ဟိုဘက်လျှောက်လိုက်
ဒီဘက်လျှောက်လိုက် လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူမက ကျောင်းမှ သန့်ရှင်းရေး
အလုပ်သမား အောင်မေ့ပြီး ထိုလူကြီးအား “ကျမ မှတ်စု စာအုပ် မေ့ကျန်ခဲ့လို့
လာယူတာပါ” ဟု ပြုံးပြပြီး အခန်းအတွင်းရှိ သူမ ထိုင်ခဲ့သော စာရေးခုံမှ
စာအုပ်ကို လိုက်ရှာပါတယ်။ စာအုပ်ကို လုံးဝ မတွေ့သောကြောင့် သူမက
ထိုလူကြီးအား “ဒီနားမှာ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်များ
တွေ့မိသလား”လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုအခါ ထိုလူကြီးက …
အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတဲ့ ငါ့ညီမလေးကို လိုက်ရှာ နေတာ ဒီနေ့ထိဘဲ”
“ရှင်၊ ဦးလေးက ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဦးသန့် အရေးအခင်း ကတည်းက ဦးလေး ညီမလေးကို
လိုက်ရှာနေတာ၊ ဦးလေး ဆိုလိုတာကို ကျမ သဘော မပေါက်ဘူး”
“အေး၊ မင်းနားလည်းအောင် ငါပြောပြမယ်၊ ဦးသန့် အရေးအခင်းတုန်းက ငါနဲ့
ငါ့ညီမလေးက ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းအတူတူ တက်ခဲ့တာပေါ့၊ စစ်တပ်က
သေနတ်တွေနဲ့ ပြစ်တဲ့နေ့မှာ ငါ့ညီမလေးကို ငါ စိတ်ပူလို့
ဒီလက်တွေ့ခန်းဘက်ကို အလာ စစ်တပ်ကငါကို ပြစ်လိုက်လို့ ငါသေသွားတာပေါ့၊
ဂျီးသရီးနဲ့ ပြစ်တာလေ၊ မယုံရင် ဒီမှာကြည့်၊ ငါနောက်ကျောမှာ ဘာမှ
ထိုသို့ လှန်ပြလိုက်သော အခါ ထိုလူကြီး နောက်ကျောဘက်တွင် ဘာမှ မရှိဘဲ
သေနတ်နှင့် ပြစ်လိုက်သော အခါ ပွင့်ထွက်သွားသော ပုံစံ အခေါင်းပေါက်ကြီး
မြင်တွေ့ ရပါတယ်။ ထိုအခါ ထိုကျောင်းသူ ရုတ်တရက် ကြောက်လန့်သွားပြီး
လက်တွေ့ခန်း အတွင်းမှ အလျင်အမြန် ပြေးထွက် ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ
ထွက်ပြေးသွားသော ကျောင်းသူအား ထိုလူကြီးက အသံနက်ကြီးဖြင့်
“ဦးသန့် အရေးအခင်းတုန်းက ပျောက်သွားတဲ့ ငါ့ညီမလေးကို တွေ့ရင် ငါဒီမှာ
စောင့်နေတယ်လို့ ပြောပေးပါ၊ ညီမလေးရယ်”
ယင်းကိစ္စ သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီး မယုံကြည်သော အဆောင်နေ ကျောင်းသား
နှစ်ဦးသည် လောင်းကြေး ပုံစံ အလောင်းအစား လုပ်၍ ယင်း သိပ္ပံ
လက်တွေ့ခန်းတွင် ညဘက် သွားရောက် အိပ်စက်ကြပါတယ်။ မနက် မိုးလင်းသော အခါ
ထိုကျောင်းသား နှစ်ဦးအား တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်များက တက္ကသိုလ်များ
ဆေးရုံးသို့ ထပ်မံပို့ဆောင် လိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။
မှတ်ချက။ ။။ http://asatekhwat.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html မှ ကူးယူသည်။
စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း (မူရင်းရေးသူမှ အမည်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ) မှာ သရဲခြောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားဟောင်းတွေဟာ ချောက်ခြားစရာအသံတွေကြားခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းပို့ကြပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကလည်း ညအခါမှာ အလင်းရောင်တွေ
ဖြာနေတာမြင်ရကြောင်းပြောကြပါတယ်။ ကောလဟာလတွေထဲမှာ ပိတ်ထားရတဲ့အိမ်သာအကြောင်း လဲပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်သာရဲ့ကြမ်းပြင်မှာ ဖျက်မရတဲ့
သွေးကွက်တွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ ညတိုင်း အဖြူရောင်မိန်းမတစ်ယောက်အိမ်သာထဲမှာငိုနေတာကို ကြားရမြင်ကြရတယ်ပြောပါတယ်။ အခုတလောမှာတော့အဲဒီအဆောက်အအုံကို ဖြိုချလိုက်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Bedok က အိမ်ခန်းတွေ- Bedok Reservoir မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွဲတွေဟာ လူမနေတော့ပေမယ့် ခုထိရှိနေတုန်းပါ။
(လေ့လာချင်သော်ရ၏) အခန်းတစ်ခုမှာ တစ်အိမ်သားလုံးသတ်သေသွားကြတာရှိပြီး နောက်လူတစ်ယောက်ဟာလည်း ဓါတ်လှေကားထဲမှာ သရဲကြောင့်
အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာရှိပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ အဲဒီနားကလူတွေဟာ ညဘက်မှာ လူမနေတဲ့အခန်းတွေဆီက အလင်းရောင်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့
သချီုင်း- စင်ကာပူမှာရှိတဲ့သချိုင်းတစ်ခုမှာထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်တွေကြုံကြရပါတယ်။ ဖြတ်သန်းသွားသူအချို့ဟာသချိုင်းကနေ
ခေါ်သံတွေကြားကြရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ သချိုင်းမှာ တ၀ဲလည်လည် သွားနေတဲ့ သရဲတွေကိုမြင်ရကြောင်းသတင်းပို့ကြပါတယ်။ ကန်တော့ထားတဲ့
မုန့်တွေစားစရာတွေမှာ သွားရာတွေတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ လူအချို့ကတော့ ခေါက်သံတွေကိုကြားရပါတယ်။ ကြောင်တွေခွေးတွေကလည်း
သချိုင်းကုန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး ဟောင်တာ အော်ကြတာတွေတွေ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို အခုအချိန်အထိကြုံရတုန်းပဲ ဆိုပဲ။
အဲဒီမှာကတော့ ဂျပန်ခေတ်ကသတ်ခံရတဲ့ တရုတ်သရဲတွေခြောက်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေဟာ ငိုသံနဲ့အော်သံတွေကြား ရကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ ခေါင်းပြတ်တွေဟာ ရွေ့လျားသွားလာနေကြောင်း ခေါင်းမပါတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေဟာကမ်းခြေတစ်လျှောက်လျှောက်သွားနေကြတာကို မြင်ရတယ်လို့လဲ ပြောကြပါတယ်။ ကေ့စ်တွေထဲမှာ သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့သွေးကွက်တွေကို မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ချန်ဂီင်္က beach houses တွေ-
မိသားစုတွေဟာ သူတို့အားလပ်ရက်တွေမှာ ကမ်းခြေကို လာပြီး နေထိုင်ဖို့ ငှားရမ်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ တွေကတော့ ကံဆိုးသူတွေပါ။
သရဲအခြောက်ခံရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများကတော့ သူတို့ကို တစ်စုံတယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားကြရပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ရေချိုးနေရင်းမမြင်ရပဲပါးရိုက်ခံရပါတယ်။ လူအချို့ကတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ငိုသံကို ကြားကြရပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေတွေအဆိုအရတော့တံခါးတွေဟာ မရပ်မနား ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ သရဲပူးခံရခြင်းနဲ့သရဲကိုမြင်ရခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့အဲဒီကိစ္စတွေဟာ ဒီနေ့အထိ ဖြစ်နေဆဲပါ။
East Coast ကမ်းခြေ-
အဲဒီကမ်းခြေမှာကတော့ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ သရဲတွေခြောက်လေ့ရှိပါတယ်။ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ အဖြူရောင်
အဆင်းရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်ကြရပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့အသံဗလံတွေကြားရကြောင်းလဲ သတင်းပို့ကြပါတယ်။ အဲဒီပင်လယ်မှာ
လူအတော်များများ ရေနစ်သေဆုံးဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညအခါ ရေကူးခြင်းကမ်းခြေတစ်လျှောက်လျှောက်သွားခြင်းတို့ပြုမယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်ပါကြောင်း။
တစ်ချို့ stations တွေဟာ သရဲခြောက်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးရထားမှာစီးနင်းတဲ့လူအချို့ဟာ အဲဒီ stations တွေမှာ ခေါင်းမပါတဲ့လူတွေ
လမ်းလျှောက်နေတာ ကိုမြင်ကြရတယ်လိုကြပါတယ်။ ရယ်သံတွေနဲ့အသံတွေကိုကြားရကြောင်းလည်း သတင်းပို့ကြပါတယ်။ သရဲခြောက်တယ်လို့
နာမည်ကြီးတဲ့ station တွေကတော့ Bishan, Braddell, Newton, Novena, ToaPayoh, Tanjong Pager နဲ့ Jurong East တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ http://www.mandalaygazette.com/23981/travel မှကူးယူဖော်ပြသည်။
အစွဲအလမ်းတစ်ခုခု ကြီးပြီး သေသွားတဲ့သူများ ၊
လတ်တလော အစိမ်းသေ သေသွားတဲ့သူများ
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နေရာတွေမှာ ကျန်နေတတ်သည်ဟု
သရဲ တစ္ဆေများ တကယ်ရှိသလား ကျွန်တော် မသိပါ။ တကယ်ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ လူတွေက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောနေကြတာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကို သရဲ တစ္ဆေများ တကယ်ရှိပါသည် ဟုလာပြောလျှင်လည်း ကျွန်တော် ယုံချင်မှ ယုံမိမှာပါ။ သရဲ တစ္ဆေများ တကယ်မရှိပါဟု ပြောလာလျှင်လည်း ကျွန်တော် ယုံမည် မဟုတ်ပါ။ ဒီလောကမှာ သိပ္ပံပညာနှင့် ရှင်းပြ၍ မရသော အရာများစွာ ရှိသည် ဟုကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။ သေသွားပြီးလျှင် နောက်ဘ၀ဆိုတာ ရှိကောင်း ရှိမည် ဟု ကျွန်တော်လက်ခံထားပါသည်။ သေသွားပြီးသူ ပြန်ဝင်စား တတ်သည် ဆိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လူများပြန်ဝင်စား တာလားဟု အမြဲ ငယ်ငယ်က တွေးခဲ့ရပါသည်။ အဲဒီအကြောင်းများကို ကျွန်တော် နောက် ကြုံမှ သေချာ ပြောပြပါ ဦးမည်။ လူ့ ပြည်ဆိုတာ ရှိသလို နတ်ပြည်နှင့် ငရဲပြည် ဆိုတာလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒီဟာတွေ အပြင် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နေရာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ အစွဲအလမ်းတစ်ခုခု ကြီးပြီး သေသွားတဲ့သူများ ၊ လတ်တလော အစိမ်းသေ သေသွားတဲ့သူများ ဟာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နေရာတွေမှာ ကျန်နေတတ်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ အဲဒီ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နေရာမှာ ရောက်နေသူများသည် တခါတရံမှာ လူ့ လောကမှ တချို့ လူများ နှင့် ထူးဆန်စွာ ဆက်သွယ်လို့ရတတ်ပါသည်။ ဒီအရာအားလုံး သည် ကျွန်တော် ကြားဖူးနားဝနှင့် ထင်မြင်ချက်များသာ ဖြစ်သည် သိပ္ပံပညာ အနေနှင့် သက်သေပြ၍ ရသော အရာများ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် ပြောပြမည့် ရွာဦးကျောင်းမှ သရဲ တစ္ဆေများ အကြောင်းကို လည်း တကယ့် အဖြစ်မှန်ဟုလည်း ကျွန်တော် မပြောလိုပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာ မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် သက်သေလည်း မပြနိုင်ပါ။ မည်သူက ကျွန်တော့်အားပြောပြသည်ကိုလည်း ကျွန်တော် ပြောမပြနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူများ ကြားဖူးသော ပုံပြင်များ အဖြစ်သာ ထားစေလိုပါသည်။
( ယူကလစ်ပင်နှင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သောဆရာတော် )
ရွာဦးက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းမှာ အလွန်အရ်ိပ်ကောင်းသော အပင်ကြီးများနှင့် စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှိလှပါသည်။ နွေရာသီ တွင်ပင် အလွန် အရိပ်ကောင်း၍ ကလေးများ အမြဲ ဆော့ကစားရာ လူကြီးများ အမြဲ စကားစမြည် ပြောဆိုရာ နေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအပင်များထဲမှ ယူကလစ်ပင်တစ်ပင်သည် ကျောင်းဆောင် တစ်ခုနှင့် နီးကပ်စွာ ပေါက်နေသည် ။ အရွက်အကိုင်းများ လေတိုက်လျှင် အမြဲ ကျိုးကျသည်။ တနေ့ တွင် ဆရာတော် တပါးသည် အကိုင်းများ ကျိုးကျနေသည်ကို မြင်သော အခါ အနီးအနားတွင် လူရှိပါက အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည့် အတွက် ယူကလစ်ပင်ကြီးအား ခုတ်ပစ်ရန် စီမံတော့သည်။ ခုတ်နေစဉ် အတွင်း အကိုင်းတစ်ခု ကျိုးကျ၍ ဆရာတော်သည် ခြေထောက် ပွန်းသွားသည်။ ” ဒီယူကလစ်ပင် တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ် မြန်မြန် ခုတ်ပစ်တာကောင်းတယ်ဟု ” လွှတ်ကနဲ အော်ဟစ် ပြောဆိုလိုက်မိသည်။ များမကြာမီနေ့ များမှာ ယူကလစ်ပင် ခုတ်ခဲ့သော ဆရာတော်သည် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုက်ကနာသလို ၀မ်းကလည်းသွားသည်။ ဆေးသောက် ဆေးကုသ သော်လည်း မပျောက်နိုင်ပဲ ကုတင်ပေါ်တွင်သာ တလှဲလှဲ နှင့်နေနေရသည်။
တနေ့ဆွမ်းစားအပြီး စကားစမြည် ပြောဆိုနေချိန်တွင် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော် ဆီသို့အပြင်မှ အသက်ကြီးကြီး ခေါင်းပေါင်းနှင့် လူတယောက် ၀င်လာပြီး လျှေက်ထားသည်မှာ ” ဤဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဆရာတော် တစ်ယောက် နေမကောင်း ဖြစ်နေပါသလား ။ ဖြစ်နေလျှင် ဖြစ်ရသည်မှာ ဆရာတော်သည် အပင်တစ်ပင်အား အခွင့်မတောင်းပဲ ခုတ်လိုက်သောကြောင့် အပင်၌ မှီခိုလျှက် နေသော တစ်စုံတစ်ယောက်က ဒေါသထွက်၍ လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်အား တောင်းပန်ပြီး နေရာအသစ်ပေးလိုက်လျှင် အဆင်ပြေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ” လျှေက်တင်ခဲ့သည်။ စကားပြောနေစဉ် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော်သည် တခြားကိစ္စ ကြောင့် သတိ သေချာ မပြုမိလိုက်မိပေ ။ သတိထားမိသော အခါ ထိုလူကြီးသည် မရှိတော့ပါ ။ ဘယ်ကလည်း ဘယ်သူသိလည်း မေးမြန်းသောအခါ ကျောင်းက မည်သူကမှ မသိ မတွေ့ မိကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကို လျှောက်ထားကြသည်။
နေမကောင်းဖြစ်နေသော ဆရာတော်သည်လည်း သက်သာ မလာပဲ တစ်နေ့ တစ်ခြား ပို၍ ဆိုးလာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျောင်းတိုင် ဆရာတော် ဘုရားသည် ဟုတ်သော်လည်း အမြတ်၊ မဟုတ်သော်လည်း အကျိုးမယုတ် ဟုတွက်ခါ လူကြီးပြောခဲ့သော စကားကို သတိရ၍ လူကြီး အကြံပြုချက်အတိုင်း လုပ်ရန် ဆုံးဖြစ်လိုက်သည် ။ ခုတ်ထားသော ယူကလစ်ပင် ကြီး အနားသွား၍ တောင်းပန်စကား ပြောကြားပေးသည် ။ “ဤယူကလစ်အပင်၌ မှီခိုလျှက် နေခဲ့သောသူ၊ အပင်အား ခွင့်မတောင်းပဲ ခုတ်မိသော ဘုန်းကြီးအား အပြစ်မယူရန် ၊ အများကောင်းကျိုးကို ကြည့်၍ ဘုန်းကြီးက ခုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဘေးနားက သရက်ပင်အား သူကို အစားပေးပါကြောင်း ၊ သရက်ပင်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရန် နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သူများကို နောင် ဒုက္ခ မပေးရန် တောင်းပန် ” ပြောဆိုသည်။ နောက်နေ့ များမှ စ၍ နေထိုင်မကောင်းသော ဆရာတော်သည် သိသိသာသာ အခြေအနေ တိုးတက်၍ ပြန်ကောင်းမွန်လာသည်။
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ တိုက်ဆိုင်သွားတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ တကယ်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သည် ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်ကြားဘူးသည်မှာ အပင်ကြီးများကို ခုတ်သည့်အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောအုပ်များကို ရှင်းသောအခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်္ချိုင်းကုန်းများကို ရွှေ့ ပြောင်းသော အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် နဂိုနေရာများတွင် ရှိကောင်း ရှိနေနိုင်သောသူများ နေရာမပျောက်အောင် ဒုက္ခမရောက်အောင် အမျက်မထွက်အောင် သူတို့ အား နေရာအသစ် ပေးထားရပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းရပါသည်။ ဤ အယူအဆွဲကို ယုံကြည်သူများရှိသလို မယုံသူများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်တော် ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖြစ်ဖူးတာလေးတွေလည်း ရှိ ၊ ကျွန်တော့်အား ဆေးကုသပေးသော ဆရာကြံ ရှင်းပြခဲ့သည်များလည်း ရှိခဲ့တော့ ၊ မယုံတယုံပေမဲ့ အရှုံးမရှိဟု တွက်ခါ အပင်များ ခုတ်ခါနီးတိုင်း ခွင့်တောင်းတတ်သည့် အကျင့် စွဲနေပါသည်။
( ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပေါ်မှ မနန်းဖြူစော )
ကျောင်းတိုင် ဆရာတော်ဘုရားနှင့် ဆရာတော်များသည် တနေ့ တွင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး ခရီး ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်ဘုရားနှင့် ကိုရင်ကြီး လေးပါး ပါလာသည် ။ တောင်ပေါ်တက်စဉ် လမ်းခုလတ် တစ်နေရာ၌ အမျိုးသမီးငယ် လေးနှစ်ယောက်သည် လမ်းဘေး ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ဆရာတော်များ အနားရောက်လာသော အခါ အမျိုးသမီးတို့ သည် သူတို့ နှင့်ပါလာသော ရေကို ကပ်သည် ။ ဆရာတော်များ နားနေစဉ် သူတို့ သည် ဆရာတော်များနှင့် တောင်ပေါ်သို့လိုက်ခဲ့ချင်ပါကြောင်း ၊ လမ်းတွင် ရေအေး ရေနွေး ကပ်ချင်ပါကြောင်း လျှောက်ထားသည်။ ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်သည် ဆရာတော်များနှင့်တိုင်ပင်ကာ ဘုရားအတူ လိုက်ဖူး စေချင်ပါသော်လည်း မသင့်တော်ကြောင်း မိန်းကလေးများအား ကိုယ့်လမ်းကိုသွားကြတာ ပိုသင့်တော်ကြောင်း ပြောကြားပြီး တောင်ပေါ်သို့ ဆက်တက်ခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်များ တောင်ပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ အံ့သြဖွယ်ရာ သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်သည် အရင်ရောက်နှင့်သည်ကို တွေ့ ရသည်။ မေးမြန်းကြည့်သော အခါ သူငယ်မလေးများသည် သူတို့ လာနေကြမို့ လို့ဖြတ်လမ်းတွေ သိသဖြင့် အရင် ရောက်နှင့်တာ ဖြစ်ကြောင်း မတင်မကျ ပြောပြသည် ။ သူငယ်မလေး နှစ်ယောက်သည် ဆရာတော်များအား ရေအေး ရေနွေး ကပ်ချင်ပါကြောင်း လျှောက်ထားသည်။ ဆရာတော်များလည်း လက်ခံ၍ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးလိုက်သည် ။ တောင်အောက်သို့ပြန်ကြွခါနီးတွင် သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်သည် ကိုရင်ကြီးတစ်ပါး နားကပ်၍ “နောင် ကံမကုန်လျှင် ပြန်ဆုံလိုကြောင်း နှင့် သူ့ နာမည်မှာ မနှင်းဖြူစော ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ အား သတိတရ လိုအပ်တာရှိလျှင် တမ်းတလိုက် စေချင်ကြောင်း ” ဦးချ၍ ရှောက်ထားခဲ့သည်။ တအံ့တသြနှင့် ဆရာတော်များလည်း ပြန်ကြွခဲ့ကြသည်။ အပြန်လမ်းတွင် ချောချောမောမော ရောက်ခဲ့သည် ။ လမ်းခုလတ်တွင် သူငယ်မလေးနှစ်ယောက်သည် ရေပူရေအေး အကြိမ်ကြိမ် ကပ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက် – နဲနဲရှည်သွားပြီ ကျွန်တော် နောက်မှ ဆက်ရေးတော့မည်။ ကိုရင်ကြီး ၊ မနန်းဖြူစော ၊ ယူကလစ်ပင် မှ သရက်ပင်ရောက်သွားသော သူ ၊ အပြုစားခံရသော ကိုရင်လေး ၊ ဆရာတော် မြင်တွေ့ လိုက်သော အရက်မြင့်မြင့် အသားမဲမဲ သူ ၊ သပြေပင်အောက်နားက ကိုရင်လေး မွေးထားသော သရဲလေး နှစ်ကောင် အကြောင်းများ ကျွန်တော် နောက်မှ ဆက်ပြောပြတော့မယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော့်အား ပြောပြသည့် သူများသည် ယုံကြည်လောက်၍ ကျွန်တော် အတွက်ကတော့ တကယ့် အဖြစ်အပျက် များဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အစက ပြောခဲ့တာကို မမေ့ကြပါနှင့် ၊ ဤ အရာများကို ကြားဖူးသော ပုံပြင်များ အဖြစ်သာ မှတ်ထားစေလိုပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ www.ainmat.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။